9 Nougat နှင့်အတူ Huawei P7.0 Lite ကို | Androidsis
Francisco Sanchez | | Android Root, Huawei, လဲ tutorial, Android ဗားရှင်း
အရမ်းကောင်းတဲ့ androids တွေ၊ ဒီတစ်ခါတော့မင်းကိုငါလာသင်တယ် ဘယ်လို root Android Android Nougat နှင့်အတူ Huawei P9 Lite (7.0) လွယ်ကူပြီးထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ငါဒီ Android version အသစ်ကိုဘယ်လို root လုပ်မလဲဆိုတာကိုစပိန်ဘာသာနဲ့သင်ခန်းစာတွေသိပ်မတွေ့ရတော့ဒီနေ့ငါလိုက်နာရမယ့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့ငါလုပ်နေတယ်။ ကြိုတင်သတိထားပါ ရှင်းပြထားသည့်အဆင့်များကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာပါကဤဖြစ်စဉ်သည်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိပါ။ စလိုက်ကြစို့!
3 developer ရွေးချယ်မှုများကို Enable
4 သင်၏ bootloader ကိုသော့ဖွင့်ပါ
6 Google Play Store မှ Root Checker ကိုအခမဲ့ရယူပါ
ဒီဖြစ်စဉ်ကိုလိုက်နာခြင်းဟာစွန့်စားခြင်းပါ ၀ င်ပါတယ်။ ယခု မှစ၍ ဒီသင်ခန်းစာကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လိုက်နာမယ်ဆိုရင်ပြnoနာမရှိပါဘူး။ သင်၏ terminal ကိုသင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ် Androidsis မှတာဝန်မရှိပါ.
ဘာမှမလုပ်မီ အရန်ကူးရန်ကြိုးစားပါ အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်ကတည်းက စက်ရုံမှစက်ရုံကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီးအတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်မှအချက်အလက်အားလုံးကိုဖျက်ပစ်သည်.
မသန်စွမ်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုဒ်တောင်းဆိုပါ ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာကကျန်ခဲ့တဲ့စာမျက်နှာကိုသွားဖို့ပါ ဒီမှာ၊ ၎င်းကိုတောင်းခံရန်မှတ်ပုံတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ကလစ်နှိပ်ပါ ဒေါင်းလုပ် ချက်ချင်းနောက်မှ Bootloader Unlock။ ဤအစီအစဉ်အတိုင်း
မော်ဒယ်နံပါတ်။ (၎င်းကိုတယ်လီဖုန်းအကြောင်းတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ အရေးကြီးချက် - ထားပါ Huawei VNS-LXX, အားလုံးစာလုံးကြီးနဲ့ဒါကြောင့်ပconflictိပက္ခလည်းမရှိ)
အမှတ်စဉ်နံပါတ်။ (ဖုန်းအကြောင်း> အခြေအနေတွင်တွေ့နိုင်သည်)
IMEI ။ (Dialer / numeric keypad ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည် * # 06 #IMEI ထဲဝင်တဲ့အခါမှာစာမျက်နှာမှာပြproblemsနာရှိနေရင် SIM dual dual ရှိရင်ပထမတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြိုးစားကြည့်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်း ID ။ (ဒီကုဒ်နှင့်အတူအောင်မြင်သည် * # * # 1357946 # * # *)
(သင့်တွင်ဂဏန်း ၁၆ လုံးသော့ဖွင့်ခြင်းကုဒ်ရှိပါက၎င်းကိုကူးယူပြီးသော့နှင့်သော့အောက်၌သာထားပါ။ )
developer ရွေးချယ်မှုများကို Enable
ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူရွေးစရာများသို့သွားပါ။ (ကိရိယာအကြောင်း> တည်ဆောက်မှုနံပါတ်ပေါ်အကြိမ်ကြိမ်နှိပ်ပါ) ။ OEM Unlocking နှင့် USB debugging အတွက်အမှန်ခြစ်ပါ, ဒီအဆင့်ကအရေးကြီးတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ဟာ terminal ကိုအသုံးမပြုနိုင်ပဲ၊ သူကို technician ဆီခေါ်သွားဖို့တောင်လိုတယ်။ ဤအုတ်ဂူအများစုသည်ဤရွေးချယ်စရာများကိုသက်ဝင်မထားခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
တည်ဆောက်အရေအတွက်အပေါ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကိုကလစ်နှိပ်ပါ နှင့် developer ရွေးချယ်စရာ enabled ပါလိမ့်မည်
ငါတို့ရတယ် developer ရွေးချယ်စရာ
ကျနော်တို့ OEM သော့ဖွင့်ခြင်းနှင့် USB debugging ကို enable
ယခုငါတို့ bootloader ကိုနောက်ပိုင်းတွင်သော့ဖွင့်နိုင်သည် flash recovery နှင့် root ကို install လုပ်ပါ.
သင်၏ bootloader ကိုသော့ဖွင့်ပါ
ငါသည်သင်တို့ကိုဤအော်တိုဒရိုင်ဘာ installer ထားခဲ့, သော့ဖွင့် tool ကို, Recovery + Root (Eloy Gómezနှင့် XDA မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကျေးဇူးတင်စကား) ။
ဖိုင်များကိုသင်လက်ထဲမှာရှိသည့်ဖိုင်တွဲတွင်ဖြည်ပါ ကျွန်ုပ်တို့သည် universal driver များနှင့် HiSuite ကို install လုပ်သည်Command console မှညွှန်ကြားချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုမေးပါလိမ့်မယ် fastboot mode မှာဝင်ရောက်ခွင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကို Volume- ကိုတစ်ကြိမ်ပိတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကို pc သို့ဆက်သွယ်သည်။ (ဒါကထူးဆန်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် Kirin 650 ပရိုဆက်ဆာတွေလိုပဲ။ )
ကျွန်ုပ်တို့၏သော့ဖွင့်ကုဒ်ကိုထည့်သောအခါ terminal သည်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုကဲ့သို့ပြလိမ့်မည်။ YO သို့ volume + ခလုပ်ဖြင့်ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သူက Factory Reset လုပ်ပြီးအလိုအလျောက် reboot လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့ terminal ကို root လုပ်ပြီးသည့်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့စတင်သည်အခါတိုင်းသတိပေးမျက်နှာပြင်ပေါ်လာလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင်သော့ဖွင့်ထားသော bootloader ရှိသည်, ပါဝါကိုနှိပ်ပါနှင့်ဖုန်းပုံမှန်အားဖြင့်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
terminal ကိုဖွင့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်, SD ပေါ်တွင်ရှိ zip မှကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကရယူခဲ့သော SuperSu 2.79 ဖိုင်ကိုသိမ်းပါ နှင့်အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်အတွက်ပြန်လည်နာလန်ထူနှစ်ခုအမှတ်တရများထဲကတစ်ခုမဖတ်ပါဘူးကိစ္စတွင်။
ပြီးရင် Recovery ကို flash လုပ်ရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal ကိုပိတ်ပြီး fastboot mode ဖြင့်စတင်ပါ အရင်ကပြောခဲ့သလိုပါပဲ၊ unlock folder ထဲမှာ Control + Shift keys နဲ့ mouse ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Open command ၀ င်းဒိုးပေါ်မှာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ pc မှကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုတွေ့ရှိသည်ကိုသိရန်အောက်ပါ command ကိုရေးပါ။ fastboot devices များ (သင်နံပါတ်စဉ်ရလိမ့်မည်)
recovery ကို flash လုပ်ဖို့အောက်ပါ command ကိုရေးပါ။ fastboot flash recovery ကို twrp-3.1.0-2-hi6250 (၎င်းသည် recovery ကို flash လုပ်လိမ့်မည်)
ဒါပြီးပြီဆိုရင် SuperSu 2.79 file ကို Recovery and မှတဆင့် flash လုပ်ရန်ကျန်နေသေးတယ် ငါတို့ Huawei P9 Lite ကို Nougat နှင့်ရင်းမြစ်အခွင့်ထူးများထားပြီးဖြစ်သည်.
Play Store မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ စစ်ဆေးနိုင်သည်။ root Checker ငါတို့အမြစ်အခွင့်ထူးရှိပါကအရာစစ်ဆေးပါတယ်။
Google Play Store မှ Root Checker ကိုအခမဲ့ရယူပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » သင်၏ Huawei P9 Lite ကို Nougat 7.0 ဖြင့် root လုပ်ပါ
ကောင်းသောအလုပ် Fran ။ ငါဗီဒီယို hehe ၌သင်တို့ကိုအရေးယူအတွက်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ချင်ခဲ့ကြပေမယ့်။ ငါထင်တဲ့အရာကိုငါအက်ကွဲတဲ့ပွေ့ဖက်။
Raul Flores ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို ။ ဂုဏ်ယူပါတယ်, သင်ခန်းစာအလွန်ပြည့်စုံခြင်းနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါသည်, ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အပျနှံကိုအလွန်တန်ဖိုးထားသည်
raul flores ပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ။ သင် Doogee y6 Max သို့ root + twrp ကိုမှတ်စုတစ်ခုသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုတင်ပို့နိုင်မလားသိလိုခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ကောင်းစွာရှင်းပြထားသောအလွန်ကောင်းသောသင်ခန်းစာအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ androidsis အုပ်စုတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
အလွန်ကောင်းသောသင်ခန်းစာ၊ မည်သူမဆိုပြexplainedနာမရှိဘဲလုပ်နိုင်ရန်အသေးစိတ်များစွာကိုရှင်းပြခဲ့သည်။ ငါဤကဲ့သို့သောပိုပြီးဆောင်းပါးများကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ Huawei p9 မပါ ၀ င်လျှင်ဤလုပ်ငန်းကိုကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည်
မင်္ဂလာပါ၊ tutorial တစ်ခုလုံးကိုတွေ့တဲ့အခါ bootloader ကိုသော့ဖွင့်လိုက်ပြီးအမြစ်ကိုအမြစ်တွယ်အောင်ပြန်လည်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ငါသံသယဝင်တယ်။ ကျွန်တော်ဆဲလ်ကိုစတင်သည့်အခါတိုင်း၊ ငါတို့ bootloader သော့ဖွင့်ထားသောပိုစတာပေါ်လာလိမ့်မည်။ ငါအလိုအလျှောက်စက်နှိုးပါကအသံနှောင့်အယှက်အသံကတည်းက
Francisco Espinar Aguilera ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာဂုဏ်အသရေ ၉ ရှိတယ်။ bootloader ကိုဖွင့်ပြီးတဲ့အခါ recovery ကိုကျွန်တော် install လုပ်လို့မရပါဘူး
oem unlock ကိုပိတ်ထားပြီး activation မလုပ်နိုင်ပါ။ ၎င်းတွင်အဖြေတစ်ခုရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
francisco espinar aguilera အားပြန်ကြားပါ
ပါပလော Esteban ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ download link မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမလဲ။
Pablo Esteban အားပြန်ပြောပါ
မင်းမှာ download link တွေရှိတယ်၊ ငါလည်းသူတို့ကိုမတွေ့ရသေးဘူး
မင်္ဂလာပါ၊ အားလုံးကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် OEM ကိုသော့ဖွင့်ထားခြင်းဟာပိတ်ထားတာကြောင့်၎င်းကိုမဖွင့်နိုင်သလို၎င်းကဲ့သို့သောအရာများပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖြေရှင်းချက်အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်မိမှာပါ။
Matías Arriagada ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်းပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောနှစ်သစ်တစ်ခုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကို root လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်၊ သို့သော်မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ ငါ "Bootloader Unblock" အဆင့်ကိုရောက်တဲ့အခါသူတို့အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းတဲ့သူကစွန့်ခွာသွားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါဒီဟာမရှိဘူး၊ ငါဘယ်လိုဆက်ပြီး root လုပ်မလဲ။
Matías Arriagada အားပြန်ပြောပါ
download link တွေကိုရှာမရဘူး ကျေးဇူးပြုပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကူညီပေးပါလား
အလက်ဇန်းဒါး Robledo ဟုသူကပြောသည်
download link ဘယ်မှာလဲ။
Alejandro Robledo အားပြန်ပြောပါ
Gustavo အီး ဟုသူကပြောသည်
ငါဒီမှာထားခဲ့ပါလိမ့်မယ်, ဒါက download link ကိုဖြစ်ပါသည်, အမှန်တရားအလွန်ကောင်းသောလက်စွဲပေမယ့်လင့်များပျောက်ဆုံးနေခဲ့သည်, Juan Roberto Garcia ကငါရှာတွေ့ရှိရာစာမျက်နှာကျေးဇူးတင်စကား။
Android အတွက် FaceTime အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများ